Global Voices teny Malagasy » Bush sy ny Islamo Indonezia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Aogositra 2018 3:04 GMT 1	 · Mpanoratra A. Fatih Syuhud Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Na ireo lazaina fa Miozolomana manam-pahaizana liberaly, mpandala ny mahazatra, na antonony aza dia nitsikera mafy ny fanafihan'i Etazonia tao Iraka. Ulil Abshar-Abdalla, ny mpanorina ny aringan Islam Liberal (JIL)  (Tambajotra Islamo Liberaly), ohatra, dia nanoratra tamin'izany fotoana izany (saingy indrisy fa tsy hita intsony ny rohy ) fa habibiana mibaribary ny fanafihana ary niresaka ny ohatra momba ny fihatsarambelatsihin'i Etazonia izy. Zava-dehibe ny manamarika eto, fa vatsian'ny Etazonia vola amin'ny ankapobeny ny JIL, fikambanana iray mifantoka amin'ny lohahevitra Islamika avy amin'ny fomba fijerin'ny Miozolomana liberaly/tony fihetsika. Ary nianatra dôktôrà tany Boston mihitsy aza i Atoa Ulil .
Nanambara  tao amin'ny Sampam-baovao Antara i Andreas H Pareira, Kristiana sady solombavambahoaka tamin'ny antoko PDIP an'ny filoha teo aloha Megawati hoe: “Aza malemilemy fihetsika manoloana an'i Etazonia, mba tsy hiheverana fa firenena saribakolin'i Etazonia isika.”
Nanonona ilay mpandalina ara-politika iray avy any atsinanan'i Indonezia, Profesora Muin Salim ny Berita Sore , gazety mpivoaka isan'andro any Medan, Avaratr'i Sumatra izay nilaza fa “tsy mitondra soa mihitsy ho an'i Indonezia ” ny fitsidihan'i Bush.
Na izany aza dia tsy tokony ho diso fanantenana loatra ireo mpifandray amin'ny vahoaka avy amin'i Bush satria ny Komity Ulama ao Indonezia na MUI (Majelis Ulama Indonesia), malaza ratsy noho ny fomba fijeriny mpandala ny mahazatra no nitsena an'i Bush niaraka tamin'ny famihinana am-pitiavana ary nihevitra ny fitsidihany ho “miabo sy mahasoa “.
Hanombohana azy, namoaka lahatsoratra lava momba ny fitsidihan'i Bush avy amin'ny fomba fijery samihafa i Senopati Wirang ao amin'ny Intelijen Indonesia (Fahaizana Indoneziana), indrindra indrindra avy amin'ny fomba fijerin'ny sampam-pitsikilovana sy ny fanambarana manjavozavo avy amin'ny mpitandro filaminana, indrindra momba ny marina tao ambadiky ny fampiasana mpiambina be loatra, izay heveriny fa tafahoatra .
Toa tsy niraharaha ny fitsidihan'i Bush sy ny adihevitra momba ny fitsidihany i Tata Danamihardja ao amin'ny Buka Mulut. Na izany aza, nanana ny fitarainany izy momba ny mpitandro filaminana Indoneziana toy ny hoe nahoana ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Amerikanina no tsy maintsy hanaovan'ny olona sorona ny zava-dehibe maro , anisan'izany ny enina miliara rupiah (manodidina ny enina tapitrisa dolara), ny fandraràna vonjimaika ny mpivarotra an-dalambe ary ny fanakatonana vonjimaika ny sekoly maro any amin'ireo faritra manodidina izay ho tsidihin'ny filohan'i Etazonia.
MicoKelana , kosa, dia nihevitra tamin'ny fomba fijery miabo sy mitandrina kokoa . Miharatsy ny toekarena Indoneziana, hoy izy. Mety ho fambara tsara ny fitsidihan'i Bush, noho izany: raha tonga eto Indonezia ny hany lehiben'ny firenen-dehibe manankery tokana dia toy izany koa ireo firenena hafa. Noho izany, ho misimisy kokoa ireo mpampiasa vola.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/18/124787/
 aringan Islam Liberal (JIL): http://islamlib.com
 tsy mitondra soa mihitsy ho an'i Indonezia: http://www.beritasore.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9454&Itemid=36
 miabo sy mahasoa: http://www.liputan6.com/view/1,132666,1,0,1.html
 zava-dehibe maro: http://bukamulut.blogspot.com/2006/11/antara-bush-dan-handphone.html
 fomba fijery miabo sy mitandrina kokoa: http://micokelana.com/blog/warna-warni-kunjungan-bush-ke-indonesia/